The Ab Presents Nepal » ‘राजपा नेपालमा बसेर भारतीयहरुको पक्षमा काम गर्न गठन भएको हो’ :चित्रबहादुर केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् ।उनले अन्तिममा कांग्रेस पछि हट्छ कि भन्ने आफूलाई शंका लागेको भएपनि हिजो कांग्रेसले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेकोले खुशी व्यक्त गरेका हुन् ।
त्यस्तै, उनले राजपा पार्टीमाथि नेपालमा बसेर भारतीयहरुको पक्षमा काम गर्न गठन भएको भनेर गम्भिर आरोपसमेत लगाएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अध्यक्ष केसीले यस्तो बताएका हुन् । केसीसँग धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको पक्षमा मत दिने निर्णय ग¥यो, तपाईंहरुको कहिले आउँछ ?हाम्रो त आइसक्यो नि । अस्तिको सर्वदलीय बैठकमै सबैको अगाडि प्रष्ट भनिसकेको छु ।
तपाईंले के भन्नुभयो ? निशान छापको लागि जुन संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ । यसको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि समर्थन छ भनेर सर्वदलीय बैठकमै स्पष्ट गरिदिएको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावमा अरु विषय पनि प्रवेश गर्नुपर्छ । त्यसको लागि संघीयतालाई खारेजी राष्ट्रिय जनमोर्चाको पहिलादेखिको माग हो । हामीले यो संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गर्न पाउनुपर्छ भनेका छौं ।
नेपाली कांग्रेसले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर बनाइएको नक्सा अनुसार निशाना छाप हुनुपर्छ भन्ने संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेर राम्रो काम ग¥यो ?यो कांग्रेसले धेरै राम्रो काम ग¥यो । अन्तिममा पछिहट्ने काम गर्छ कि भनेर मलाई असाध्यै डर लागेको थियो । किनभने महाकाली सन्धिका बेलामा चाहीं चुक्यो । त्यसको सजाय पनि पायो । यसपालि पनि कांग्रेस बिग्रन्छ कि भन्ने मलाई धेरै डर लागेको थियो भित्रभित्रै । एकदमै स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ । त्यसको लागि धन्यवाद छ नेपाली कांग्रेसलाई ।
समाजवादी पार्टीले पनि आफूलाई संशोधनको पक्षमा उभ्यायो, तर राजपाटी त विपक्षमा रह्यो नि ?राजपा किन गठन भएको हो । यसको जन्म नेपालमा किन भयो ? उसले नेपालको सन्दर्भमा केगरिराखेको छ । त्यो कुरा त संसारले जान्दछ । नेपाली जनताले पनि जान्दछन् ।
राजपा किन गठन भएको रहेछ त ?नेपालमा बसेर भारतीयहरुको पक्षमा काम गर्न गठन भएको हो । यो नेपालको पक्षमा, तराईंका शोषित, पीडित जनताको पक्षका काम गर्न होइन ।